डाउनलोड गर्नुहोस् Minecraft Launcher को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (10.12 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Minecraft Launcher,
Minecraft Laucher Minecraft (Bedrock Edition), Minecraft Java Edition र Minecraft Dungeons को Windows को लागि डाउनलोडर र लन्चर हो।
Windows PC को लागि Minecraft खेल Windows 11 / 10, Minecraft Dungeons Windows7र माथिका अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरहरूमा खेल्न सकिन्छ।
Minecraft लन्चर डाउनलोड गर्नुहोस्
पहिलो लगइन स्क्रिनमा, तपाईंले पहिले नै अवस्थित Minecraft खाता, Mojang स्टुडियो खाता, वा तपाईंको पुरानो Minecraft खातासँग साइन इन गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग खाता छैन भने, तपाईंले नि: शुल्क Minecraft खाता सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाइँ लिङ्क क्लिक गरेर नयाँ खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र सेटिङ/सेटिङ्स ट्याबबाट लग इन गर्नुहोस्।
बायाँ कुनामा तपाईले समाचार ट्याब, प्रत्येक खेलको लागि एउटा ट्याब, र सेटिङ्स ट्याबमा Minecraft Laucher देख्नुहुनेछ। तपाईंले Minecraft लन्चरको शीर्ष बायाँ कुनामाबाट आफ्नो हाल सक्रिय खाता हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ Microsoft खातासँग साइन इन हुनुहुन्छ भने, तपाइँसँग Xbox गेमरट्याग छैन भने तपाइँको Java संस्करण प्रयोगकर्ता नाम देखाइन्छ। तपाईं सक्रिय खाताहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ वा यसमा क्लिक गरेर आफ्नो खाताहरू लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ र Minecraft कसरी खेल्ने? तपाईं मद्दत पृष्ठमा पुग्न सक्नुहुन्छ जुन प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ जस्तै:
Minecraft डाउनलोड गर्नुहोस्
Minecraft Laucher ले Windows को लागि Minecraft खेल समावेश गर्दछ। मुख्य प्ले/प्ले खण्डले तपाइँलाई कम्प्युटरमा Minecraft डाउनलोड गर्न र प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ प्ले बटन क्लिक गरेर Minecraft Bedrock Edition खेल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँको पीसी इन्टरनेटमा जडान गरिएको छैन भने, तपाइँ अफलाइन मोडमा खेल चलाउन सक्नुहुन्छ, तर इन्टरनेट बिना खेल्न सक्षम हुन यसलाई सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यदि असमर्थित यन्त्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले समर्थित यन्त्रहरू भएको वेबसाइटमा लिङ्क भएको अलर्ट देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंले खेल खरिद गर्नुभएको खातामा लग इन हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई प्ले बटनको सट्टा खेलको नि:शुल्क डेमो संस्करण डाउनलोड गर्न Microsoft स्टोरमा निर्देशित गरिनेछ।
Minecraft लन्चर र Minecraft Windows (Bedrock Edition) खेलको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्न र जवाफहरू, खेल मर्मत वा अनइन्स्टल गर्नको लागि स्थापना खण्ड, र नयाँ / पछिल्लो संस्करणमा नयाँ के छ भनेर प्याच नोट खण्ड छ।
Minecraft विन्डोज सुविधाहरू
तपाईंसँग Minecraft खेलमा असीमित स्रोतहरू छन्। तपाईं रचनात्मक मोडमा आफ्नो कल्पनाको सीमाहरू धकेल्नुहुनेछ, अस्तित्व मोडमा गहिरो खन्नुहोस्, खतरनाक भीडहरूलाई रोक्नको लागि शिल्प हतियारहरू र आर्मरहरू। तपाईं Minecraft को विशाल संसारमा एक्लै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ वा आफ्ना साथीहरूसँग अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ र अस्तित्वको लागि लड्न सक्नुहुन्छ।
Minecraft Java संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
प्ले खण्डले तपाईंलाई Minecraft Java संस्करण डाउनलोड गर्न र सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। यसले बायाँमा स्थापना खण्ड, दायाँमा तपाइँको Java संस्करण प्रयोगकर्ता नाम, र तलको नवीनतम Minecraft खेल अद्यावधिकहरूको बारेमा जानकारी पनि सूचीबद्ध गर्दछ। तपाईं प्ले बटन क्लिक गरेर खेल खेल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको कम्प्युटर इन्टरनेटमा जडान गरिएको छैन भने, तपाइँ अफलाइन मोडमा खेल चलाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाइँ सुरुबाट स्थापना फाइलहरू डाउनलोड गर्नुभएको छ भने, तपाइँ इन्टरनेट बिना खेल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले खेल खरिद गर्नुभएको खातामा लग इन गर्नुभएको छैन भने, प्ले बटन देखा पर्दैन, बरु एउटा बटन देखा पर्नेछ जहाँ तपाइँ खेलको निःशुल्क परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्याच नोटहरूले तपाइँलाई खेलको नवीनतम अद्यावधिकको साथ नयाँ के छ भनेर थाहा दिन्छ।
तपाईं स्थापना खण्डबाट अनुकूलन स्थापनाहरू सिर्जना र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले क्रमबद्ध गर्न र स्थापनाहरू खोज्नका लागि बटनहरू देख्नुहुनेछ, साथै जारी गरिएका संस्करणहरू, स्न्यापसटहरू, र खेलको परिमार्जन गरिएका संस्करणहरूसँग स्थापनाहरू सक्षम पार्न चेकबक्सहरू देख्नुहुनेछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा नवीनतम संस्करण र नवीनतम स्क्रिनसटको लागि सेटअपहरू छन्। तपाईंले नयाँ स्थापनामा क्लिक गरेर नयाँ स्थापना सिर्जना र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले बटनले तपाइँलाई चयन गरिएको स्थापना सुरु गर्न अनुमति दिन्छ र तपाइँ फोल्डर आइकनको साथ खेल कहाँ स्थापना गरिएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
Minecraft लन्चरले तपाईंलाई यसको पछाडि अनुकूलता सुविधाको साथ खेलको सबैभन्दा पुरानो संस्करणहरू पनि खेल्न दिन्छ। तपाईंले Minecraft लन्चर सेटिङ्स ट्याबमा जाभा संस्करण विगतका संस्करणहरू देखाउनुहोस् चयन गरेर स्थापना खण्डमा तपाईंले स्थापना गर्न र प्ले गर्न सक्ने संस्करणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पुरानो संस्करणहरूमा विभिन्न बगहरूमा चल्न सक्नुहुन्छ, म तपाईंलाई यसलाई छुट्टै डाइरेक्टरीमा चलाउन र संसारहरू जगेडा गर्न सुझाव दिन्छु। जब तपाइँ विगतका संस्करणहरू खोल्नुहुन्छ, तपाइँ Minecraft बिटा र अल्फा संस्करणहरू साथै क्लासिक संस्करणहरू खेल्न सक्नुहुन्छ।
स्किन सेक्सनमा, तपाइँ खेलमा कस्तो देखिनुहुन्छ र तपाइँको उपस्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टीव र एलेक्स पूर्वनिर्धारित छाला हो। तपाइँ छाला पुस्तकालयमा प्रयोग क्लिक गरेर छाला लागू गर्न सक्नुहुन्छ। दृश्यहरू सम्पादन, नक्कल र मेटाउन सकिन्छ। स्टीव र एलेक्स छाला नक्कल गर्न सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ, तर मेटाउन सकिँदैन।
असीमित सम्भावनाहरूको साहसिक कार्यको लागि तयार हुनुहोस् जब तपाईं निर्माण गर्नुहुन्छ, मेरो, लडाइँ भीडहरू, Minecraft Java संस्करणमा गतिशील Minecraft संसारको अन्वेषण गर्नुहोस्।
Minecraft Dungeons डाउनलोड गर्नुहोस्
Minecraft Dungeons पृष्ठमा प्ले गर्नुहोस्, dlc, faq, स्थापना र अद्यावधिक नोट ट्याबहरू हामीलाई स्वागत छ। प्ले खण्डले तपाइँलाई तपाइँको कम्प्युटरमा Minecraft Dungeons को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, तपाइँ प्ले बटन क्लिक गरेर खेल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ खेलको स्क्रिनसटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र Minecraft अद्यावधिकहरूको बारेमा समाचारहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई Minecraft PC खेल छुट्टै खरिद गर्न निर्देशन दिइनेछ।
तपाईंले DLC ट्याबबाट Minecraft Dungeons को लागि डाउनलोड योग्य सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। DLC खोज्दा नतिजाहरू साँघुरो गर्नका लागि फिल्टर विकल्पको साथ खोजी सुविधा उपलब्ध छ। प्रत्येक DLC बायाँमा DLC जानकारीको साथ कार्ड दृश्य संरचनामा देखाइएको छ। तपाईले FAQ सेक्सनबाट Minecraft Dungeons बारे जान्न चाहनुहुने सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं अँध्यारो कालकोठरीमा एक्लै प्रवेश गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ, वा तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई तपाईंसँगै तान्नु हुन्छ? Minecraft Dungeons मा, चार जनासम्म खेलाडीहरू एक्शन-प्याक, खजाना-प्याक स्तरहरूको जंगली विविध दायरा मार्फत लड्नेछन्। एउटा महाकाव्य मिशन तपाईलाई पर्खिरहेको छ जहाँ तपाईले सबै गाउँलेहरूलाई बचाउनु पर्छ र दुष्ट गाउँले आर्चीलाई हराउनु पर्छ।
Minecraft लन्चर टर्की सहित 60 भन्दा बढी भाषाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म खेलहरू चलाउँदा Minecraft लन्चर खुला राख्न सिफारिस गर्दछु। एनिमेसनहरू सक्षम गर्नुहोस्, पूर्वनिर्धारित रूपमा असक्षम पार्नुहोस्, गति ग्लिचहरूबाट बच्नको लागि हार्डवेयर एक्सेलेरेशन असक्षम गर्नुहोस्। तपाइँ खाता खण्डबाट तपाइँको Microsoft, Mojang Studios वा Minecraft खाताहरू थप्न, व्यवस्थापन गर्न, हटाउन र स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
फाईल आकार: 10.12 MB
पछिल्लो अद्यावधिक: 15-02-2022